lP PBX Fitaovana telefaona finday Ip PBX mpizara finday -JWBT920, Sina lP PBX Fitaovana telefaona finday Ip PBX mpizara telefaona -JWBT920 Mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
lP PBX Fitaovana telefaona finday Ip PBX mpizara an-telefaona -JWBT920
Ity mpizara lozisialy ity dia tambajotra iray sy fantsom-pifandraisana tafiditra an-tariby izay switch VoIP natokana ao anatin'ny orinasa. Ny telefaona ip rehetra dia azo soratana amin'ny mpizara finday ip. Azontsika atao ny mitantana ny telefaona rehetra amin'ny alàlan'ity mpizara ity.
Ny tranga dia mandray ny volavola firafitra vy rehetra, izay matevina sy matanjaka. Izy io dia mandray mpikirakira tohotra sy mahazaka tohina ho an'ny kapila mafy, ary manitatra ny toeran'ny kapila mafy 2 hanohanana ny takiana fampiharana lehibe. Manome seranan-tsambo Gigabit Ethernet, manohana ny fampidirana ny karatra fanitarana PCI lava halavany, dia solosaina fanaraha-maso indostrialy ambany herinaratra, ampiasaina matetika ao amin'ny fantsona playback TV nomerika, rafi-pifandraisana video, rafitra antso, rafitra fandraisam-peo, sns.
Refy (sakany × halaliny × haavony)
220V famatsiana herinaratra
Tohano ny 220V famatsiana herinaratra roa, herinaratra miditra 110V-240V
48V famatsiana herinaratra
Tohano ny 48V famatsiana herinaratra roa, herinaratra miditra 41V-60V
Hery (entana feno)
Seranan-tsambo Ethernet Gigabit 2
Tohano ny G.711A / μ, G.723.1, G.729A
Fanakanana ny akony
Mpampiasa voasoratra anarana IP faratampony
Isan'ny vatan'ny IP faran'izay betsaka
Isan'ny faran'izay betsaka amin'ny loharanom-baovao
Fantsona 200 loharanom-pahalalana haino aman-jery (VoIP, fandraisam-peo sy fizarana playback), fantsona 200 loharanom-pahalalana ho an'ny fihaonambe
Isan'ny antso miaraka
Fiantsoana 30 miaraka, fotoana fampifandraisana antso antonony <1.5s
Taham-pifandraisana antso> 99%
Fotoana famerenana mavitrika ny fehezam-peo
Fotoana famindrana feo maodely feo <60ms
Manohana efitrano fivoriana 4
Mpandray anjara faran'izay betsaka amin'ny kaonferansa
Tohano hatramin'ny 128 ireo mpandray anjara amin'ny kaonferansa
Isan'ny mpandray anjara faran'izay betsaka amin'ny fivoriana tokana
Ny fivoriana tokana dia mahazaka mpandray anjara 128.
MTBF: 62 taona
Ny hamandoana eo amin'ny tontolon'ny asa (tsy mampihena)
1. Ity fitaovana ity dia mandray ny endrika famolavolana 1U ary azo apetraka amin'ny talantalana;
2. Ny masinina iray manontolo dia mandray mpampiantrano manana indostria matanjaka ambany, izay afaka mihazakazaka maharitra mandritra ny fotoana maharitra;
3. Fifanarahana ivelany manankarena: 2X RJ45, 4 X USB haingam-pandeha 2.0, 4XRS232;
4. Omeo 1 x Line In + 1 x Mic Ao anaty vahaolana roa amin'ny interface audio;
5. Omeo PS / 2 fitendry keyboard sy totozy;
Modely: milina mitaingina mahazatra 19-inch
Mpikirakira: Tohano ireo mpandahatra andiany 115X, hatramin'ny I5-3470
Chip napetraka: chipset B75
Fahatsiarovana lehibe: Fahatsiarovana 2 * 200-pin DDR3 1600/1333 fantsom-pahalalana, 32GB fanohanana fatratra
Hard Disk: kapila mateza haingam-pandeha haingam-pandeha 500G SATA, afaka manitatra kapila matevina lehibe 3.5T / 2T
Sary: karatra sary lehibe
Audio: 2 * Fifanarahana I / O Audio (fantsom-peo sy fivoahan'ny tsipika), Realtek ALC662 6-fantsom-peo mahatoky avo lenta
Fifanarahana tontonana eo aloha: USB 2 aloha, HDD LED, LED herinaratra, bokotra fanodinana herinaratra, bokotra miverina
Fifaneraserana tontonana aoriana: Line In, Line Out, Mic In, PS2, port Gigabit Ethernet 2, 4 USB2.0, 4 port serial, 1 VGA
Loharanon-kery: famatsiana herinaratra manokana ho an'ny solosaina indostrialy, 115V / 60Hz, adaptatera 230V / 50Hz
Tontolo iainana: hatramin'ny 50 ° C (122 ° F) mari-pana tsy mampihena 90%
Industrial Fiber Switch ho an'ny Telecom System